शेयर बजारले तनाव भयो - Worldnews.com
शेयर बजारले तनाव भयो
उकालो–ओरालो भइरहने शेयर बजार केही समयदेखि ओरालो लागेर तनाव बनाएको छ। यस्तो अवस्थाले शेयर लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ। वाम गठबन्धनपछि ओरालो लागेको बजार केही सुध्रेको संकेत देखिए पनि लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ। सधैँ उकालो–ओरालोको टुंगो नहुने नेपालको शेयर बजार स्थिर भएको आजसम्मको रेकर्ड भएको मैले पाएको छैन। हुन त यो स्थिर हुने
काठमाडौँ । शेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । लगातार घट्दै आएको बजार आज २९.२५ अंकले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३५७ बिन्दुमा आइपुगेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका...
नेपालमा पहिलोपटक अनलाइनमार्फत विभिन्न सिपमूलक अध्ययनका लागि ई—ज्ञानकुञ्जको शुरूआत गरिएको छ। ट्रान्स न्यूरोन टेक्नोलोजी बेग्लोरको सहकार्यमा ई—ज्ञानकुञ्ज ईडीयू सिस्टम...
इञ्जिनियरले फुकाए समस्याको पोको
नेपाल समाचारपत्र, हेटौँडा । भुकम्पपीडितका समस्या सुल्झाउँदै हिँडेका इञ्जिनियरहरुले समयमै तलब र अन्य सुविधा पाउन नसक्दा आफ्नो दैनिकी नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै चित्त दुखाएका...
रमेशचन्द्र बादे श्रेष्ठ निष्पक्षता, निःस्वार्थ, अनुसाशित जिम्मेवार व्यक्तिको गुण हो भने सुशासन, सामाजिक सद्भाव र जनकल्याण लक्ष्य हो । जिम्मेवारी व्यक्तिको इमानदारिता नैतिक...
सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ। फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन...
ओरियन्टलका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने !
हेमन्त जोशी, काठमाडौं ओरियन्टल सहकारी संस्थाबाट पीडित सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेप साँवा र ब्याजसहित फिर्ता पाउने भएका छन्। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त...
News of Nepal 2018-01-30
हेमन्त जोशी, काठमाडौं ओरियन्टल सहकारी संस्थाबाट पीडित सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेप साँवा र ब्याजसहित फिर्ता पाउने भएका छन्। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले पहिलो चरणमा ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीका लागि जिम्मेवारी लिएको हो। २०७० साल मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका...
चुनावमा सबै शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि शान्तिपूर्ण बनाउन जरुरी रहेको छ। विभिन्न अज्ञात समूहबाट भएको यो आपराधिक गतिविधिले चुनावमा मात्रै असर पर्ने नभएर सिंगो लोकतन्त्रप्रतिको प्रहार भएको ठहर छ। विप्लवलगायतका समूहबाट भइरहेको चर्चा भए पनि विप्लवले त्यो स्वीकार नगरेको अवस्था छ। विभिन्न शीर्ष नेतालाई लक्षित गरी भएका आक्रमणले सबैलाई निराश मात्रै बनाएको छैन, यसले त चुनावी गतिविधि अनि...
गाँजा रोपे सेवा सुविधा नपाइने
रोशन पराजुली, हेटौंडा मकवानपुरका बिकट विशेषतः राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा लागुऔषध गाँजा, चरेस र अफिम खेती हुने गरेको छ ।यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि लागुऔषध खेती बिस्थापनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको पनि हो । तर, यो सफल भने हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय प्रशासनको आग्रह नसुन्दा नियन्त्रणका प्रयास व्यवहारिकरुपमा सफल हुन सकेको छैन...
यी हुन् कमजोर शेयर भएका नौ ठूला बैङ्क
–रमेश लम्साल, काठमाडौँ । कुनै समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्नुलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिन्थ्यो । सर्वसाधारण घण्टौँ लाइन लागेर भएपनि शेयर खरिद गर्न आतुर हुन्थे । पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारका कारण ‘क’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरसमेत घटेको छ । यसबाट पूराना लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको भएपनि नयाँ लगानीकर्तालाई भने अवसर प्रदान गरेको छ ।...
स्थानीय तहको बलियो कदमः गाँजा रोपे सेवासुविधा चट् !
हेटौंडा,(नेस) । मकवानपुरका बिकट विशेषतः राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा लागुऔषध गाँजा, चरेस र अफिम खेती हुने गरेको सबैलाई ज्ञात छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि लागुऔषध खेती बिस्थापनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको पनि हो । तर, यो सफल भने हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय प्रशासनको आग्रह नसुन्दा नियन्त्रणका प्रयास व्यवहारिकरुपमा सफल हुन...